How to Learn Vocabulary - Video Lesson - ( Zawgyi + Unicode ) - Learn English Actively and Effectively in Yangon !!! 09 4311 5202 ' : ''; var month = [1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]; var month2 = ["Jan","Feb","Mar","Apr","May","Jun","Jul","Aug","Sep","Oct","Nov","Dec"]; var day = postdate.split("-").substring(0,2); var m = postdate.split("-"); var y = postdate.split("-"); for(var u2=0;u2
Home / English ဘာသာစကား လေ့လာနည်း / Intermediate Level သင်ခန်းစာများ / Video သင်ခန်းစာများ / How to Learn Vocabulary - Video Lesson - ( Zawgyi + Unicode )
How to Learn Vocabulary - Video Lesson - ( Zawgyi + Unicode )
Zin Zae 10:34 PM English ဘာသာစကား လေ့လာနည်း , Intermediate Level သင်ခန်းစာများ , Video သင်ခန်းစာများ Edit
အင်္ဂလိပ် ဝေါဟာရတွေကို စွဲစွဲမြဲမြဲ မှတ်မိပြီး
တကယ့် လက်တွေ့မှာလည်း ပြန် အသုံးချနိုင်အောင်
စနစ်တကျ ဘယ်လို လေ့လာရမလဲ ?
ဘယ်လို Dictionary တွေကို
ဘယ်လို စနစ်တကျ အသုံးချသင့်တယ် ဆိုတာကို
ဆရာ ကိုဇင်ဇေက ဆွေးနွေးပေးထားတာပါ ။
( တစ်ချက်ချင်း အချိန်ယူပြီး သေချာ ရှင်းပြပေးထားတာမို့
အချက် ၆ ချက်စာကို ၂၅ မိနစ် ခန့် ကြာမြင့်ပါတယ် ... :) )
အင်ျဂလိပျ ဝေါဟာရတှကေို စှဲစှဲမွဲမွဲ မှတျမိပွီး
တကယျ့ လကျတှမှေ့ာလညျး ပွနျ အသုံးခနြိုငျအောငျ
စနဈတကြ ဘယျလို လလေ့ာရမလဲ ?
ဘယျလို Dictionary တှကေို
ဘယျလို စနဈတကြ အသုံးခသြငျ့တယျ ဆိုတာကို
ဆရာ ကိုဇငျဇကေ ဆှေးနှေးပေးထားတာပါ ။
( တဈခကျြခငျြး အခြိနျယူပွီး သခြော ရှငျးပွပေးထားတာမို့
အခကျြ ၆ ခကျြစာကို ၂၅ မိနဈ ခနျ့ ကွာမွငျ့ပါတယျ ... :) )
Active English ကနေ Mobile Application အသစ် တစ်ခု ဖန်တီးပေးလိုက်ပါတယ် ။
အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားကို လေ့လာလိုသူတွေ အတွက် Videos တွေ ၊ Ebooks တွေ ၊
လေ့ကျင့်ခန်းတွေ ပါဝင်တဲ့ Application လေးပါ ။
( Android ပဲ ရပါတယ် ။ iOS မရသေးပါဘူး ။ )
Download ချပြီး > Install လုပ်ပြီးသုံးကြည့်ပါ ။
Videos တွေ ကြည့်တဲ့ အခါ Wifi ဒါမှ မဟုတ် Data Package ဝယ်ပြီးကြည့်ပါ ။ ဒါမှ ဈေးသက်သာမှာမို့ပါ ။
ခု လက်ရှိထည့်ပေးထားတာတွေအပြင် လေ့လာ လေ့ကျင့်စရာတွေ ထပ်ပြီး တိုးတိုးပေးသွားဦးမှာပါ ။
လေ့လာရတာ အဆင်ပြေမယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်ဗျာ ။
( Active English သင်တန်း တည်ထောင်သူ )
Phone: 09 4311 5202
Zawgyi / Unicode ဖောင့် ပြဿနာကြောင့်
Applicaton ကို ဝင်ဝင်ချင်းမှာ
Application အထဲကို ဆက်ဝင်သွားရင်
သုံးလို့အဆင်ပြေအောင် လုပ်ပေးထားပါတယ် )
နားထောင်သင့်တဲ့ Videos တွေရော
၁၅ ခုလောက် ထည့်ပေးထားတာပါ ...
Active English ကနေ Mobile Application အသဈ တဈခု ဖနျတီးပေးလိုကျပါတယျ ။
အင်ျဂလိပျဘာသာစကားကို လလေ့ာလိုသူတှေ အတှကျ Videos တှေ ၊ Ebooks တှေ ၊
လကေ့ငျြ့ခနျးတှေ ပါဝငျတဲ့ Application လေးပါ ။
( Android ပဲ ရပါတယျ ။ iOS မရသေးပါဘူး ။ )
Download ခပြွီး > Install လုပျပွီးသုံးကွညျ့ပါ ။
Videos တှေ ကွညျ့တဲ့ အခါ Wifi ဒါမှ မဟုတျ Data Package ဝယျပွီးကွညျ့ပါ ။ ဒါမှ ဈေးသကျသာမှာမို့ပါ ။
ခု လကျရှိထညျ့ပေးထားတာတှအေပွငျ လလေ့ာ လကေ့ငျြ့စရာတှေ ထပျပွီး တိုးတိုးပေးသှားဦးမှာပါ ။
လလေ့ာရတာ အဆငျပွမေယျလို့ မြှျောလငျ့ပါတယျဗြာ ။
( Active English သငျတနျး တညျထောငျသူ )
>>> Download ယူဖို့ ဒီလငျ့ကို နှိပျပါ <<<
Zawgyi / Unicode ဖောငျ့ ပွဿနာကွောငျ့
Applicaton ကို ဝငျဝငျခငျြးမှာ
Application အထဲကို ဆကျဝငျသှားရငျ
သုံးလို့အဆငျပွအေောငျ လုပျပေးထားပါတယျ ) 🙂
နားထောငျသငျ့တဲ့ Videos တှရေော
၁၅ ခုလောကျ ထညျ့ပေးထားတာပါ ...
Seo Expert November 26, 2020 at 6:12 AM
Thanks foravery interesting blog. What else may I get that kind of info written in suchaperfect approach? I’veaundertaking that I am simply now operating on, and I have been at the look out for such info. learn chinese in5minutes